Safari Kenya, Kenya Safari, အကောင်းဆုံးကင်ညာ Safaris အားလပ်ရက်များ 2019
တည်းခိုခန်းများ & စခန်းများ
ကင်ညာရှိ Safari ကိုခံစားပါ
ကင်ညာ Safari Tours၊ Masai Mara Safaris၊
Amboseli Safari ခရီးစဉ်၊ 1 Day ကင်ညာ Safari ခရီးစဉ်၊
Nakuru ရေကန်ခရီးစဉ်၊ ကင်ညာ Safari စာအုပ်များ။
အံ့သြဖွယ် KENYA SAFARI | ကင်ညာဆာဖာရီအားလပ်ရက် | ကင်ညာဘတ်ဂျက် SAFARIS
City Sightseeing Tours ကင်ညာနိုင်ငံ၌သင်၏အာဖရိကခရီးစဉ်နှင့်အထူးသဖြင့်ကင်ညာနိုင်ငံသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မမေ့နိုင်သောအရာများဖြစ်စေမည့်အစီအစဉ်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသည် ကင်ညာ Safari Tours မှ, Masai Mara Safaris, Amboseli Safari ကခရီးစဉ်များ, Samburu ကင်ညာ Safari ကခရီးစဉ်, Nakuru Safari ရေကန်, ကင်ညာ Safari ကြိုတင်စာရင်းသွင်း.
City Sightseeing Tours သည်ကင်ညာရှိ Safari ကိုအကောင်းဆုံးကင်ညာ Safari နှင့် Tour တစ်ကိုယ်ရေ၊ စုံတွဲများ၊ မိသားစုများ၊ သူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိလူအုပ်စုများအတွက် Safaris တွင်အဖွဲ့ ၀ င်အဖြစ်ပါ ၀ င်ရန်အတွက် Tour နှင့် Tour အတွက် Tour ကိုကမ်းခြေ၊ တန်ဇန်းနီးယား၊ လေကြောင်းလိုင်းများသို့မဟုတ်ဟိုတယ်ဘွတ်ကင်များ၊ Sunny Beach & Hotel အားလပ်ရက်များ၊ ကင်ညာရှိ Safari နှင့်စွန့်စားမှု Safari များအပါအ ၀ င်အခြားအာဖရိကနိုင်ငံများ။
ရေကန် Nakuru အမျိုးသားဥယျာဉ်
ကင်ညာတွင် SAFARIS | ကင်ညာခရီးစဉ် | ကင်ညာခရီး
City Sightseeing Tours ကမ်းလှမ်းသည် ကင်ညာရှိ Safari, ကင်ညာ Safari တွင်အကောင်းဆုံး တစ်ကိုယ်ရေ၊ စုံတွဲများ၊ မိသားစုများ၊ သူငယ်ချင်းများ (သို့) ကမ္ဘာအနှံ့ရှိလူအုပ်စုများအတွက်ပုဂ္ဂလိကနှင့်အုပ်စုလိုက်အဖွဲ့ ၀ င် safari များအတွက်ခရီးစဉ်ကိုကင်ညာ၊ ဇန်ဇီဘာ၊ တန်ဇန်းနီးယားနှင့်အခြားအာဖရိကနိုင်ငံများရှိလေယာဉ်များအပါအဝင်၊ ဟိုတယ်ဘွတ်ကင်နေသာသဲသောင်ပြင် & ဟိုတယ်အားလပ်ရက်များ, ကင်ညာရှိ Safari နှင့်စွန့်စားမှု Safari Tours ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကင်ညာရှိယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ တတ်နိုင်သော Safari ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။
visitors ည့်သည်များနည်းပါးပြီးအံ့မခန်းဖွယ်မြက်ပင်များကိုသင်သဘောကျနှစ်သက်နိုင်သောကြောင့်မိုးရာသီများသည်လည်းခရီးသွားရန်ကောင်းသောအချိန်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ဒီဇင်ဘာလတွင်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသောကြောင့်မွေးကင်းစတိရိစ္ဆာန်များနှင့်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သောငှက်မျိုးစိတ်များကိုသင်တွေ့မြင်နိုင်သည့်အတွက်အထူးသဖြင့်ဒီဇင်ဘာလတွင်ကင်ညာသို့သွားရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။ မတ်လ၊ Aprilပြီနှင့်မေလတို့တွင်“ ရှည်လျားသောမိုး” ရွာသွန်းမှုကအလွန်စိုစွတ်သည်။
Maasai Mara အမျိုးသားအရံ
Hell's Gate အမျိုးသားဥယျာဉ်
သင်ဖမ်းရန်မကြိုးစားလျှင် ဂရိတ်ရွှေ့ပြောင်း, သင်သည် Safari ရာသီသွားကြဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပိုမိုရွေးချယ်မှုရှိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ခရီးသွားခြင်းအကောင်းဆုံးအချိန်မှာခြောက်သွေ့ရာသီ (ဇန်နဝါရီမှဖေဖော်ဝါရီသို့မဟုတ်ဇွန်လမှအောက်တိုဘာလ) အတွင်းဖြစ်သည်။ ဤအချိန်များတွင်တိရစ္ဆာန်များသည်ချုံပင်သည်သိပ်သည်းမှုမရှိရုံသာမကရေရှားပါးမှုကြောင့်ရေများကိုတွင်းတဝိုက်တွင်အချိန်များစွာဖြုန်းတီးနေသောကြောင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ စိုစွတ်သောရာသီလည်း၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုရှိပါတယ်။ ဤအချိန်တွင်ပန်းခြံများသည်လှပသောစိမ်းလန်းစိုပြေသောကြောင့်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များနည်းပါးလာသည်။
တောင်တက်ရန်အကောင်းဆုံး (နှင့်အလုံခြုံဆုံး) အချိန် တောင်ပေါ်ကကင်ညာ ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ဖြစ်သည်။ ဇန်နဝါရီ၊ ဖေဖော်ဝါရီနှင့်စက်တင်ဘာတို့ကိုရာသီဥတုအရယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးလများအဖြစ်သတ်မှတ်လေ့ရှိသည်။ ဤအချိန်များတွင်မြင့်မားသောမြင့်တက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအေးမြသောညများကိုတန်ပြန်ရန်နွေးထွေးသောရာသီဥတုမှာသင်မျှော်လင့်နိုင်သည်။ ဇူလိုင်နှင့်သြဂုတ်လတို့သည်ကောင်းမွန်သောလများ ဖြစ်၍ လူ ဦး ရေနည်းပါးသောလမ်းကြောင်းများကြိုက်သူများအတွက်ရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းတစ်ခုပေးနိုင်သည်။ သင်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုကြိုးစားရန်ဆုံးဖြတ်သည့်နှစ်မည်သည့်အချိန်ပင်ဖြစ်ပါစေနေ့တိုင်း၏အချိန်နှင့်သင်၏မြင့်တက်မှုပေါ် မူတည်၍ အပူချိန်နှင့်ရာသီဥတုသည်သိသိသာသာပြောင်းလဲသွားနိုင်သောကြောင့်၊
စွမ်းအားဖြင့် HTML5 တုံ့ပြန်မှုမကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
ကင်ညာတွင်အကောင်းဆုံး SAFARI | ကင်ညာဆာဖာရိ | ကင်ညာဆာဖာရီအားလပ်ရက်
မမေ့နိုင်သော Kenya Safaris နှင့် Safari ကင်ညာရှိ Safari
ကျွန်ုပ်တို့၏ကင်ညာရှိကျွန်ုပ်တို့၏ Safaris သည်နိုင်ရိုဘီမှအလင်းရောင်လေယာဉ်ပေါ်မှခုန်ချခြင်းနှင့်အသေးစားနှင့်အလတ်စား Safari စခန်းများတွင်တည်းခိုခြင်း၊ မောင်းနှင်ခြင်းသို့မဟုတ်ပျံသန်းနိုင်သော Safaris များဖြစ်သည်။ ကင်ညာ Safari စခန်းများ အလွန်ကြီးမားသော၊ အမြဲတမ်းပြည့်စုံသောပရိဘောဂအစုံအလင်ပါ ၀ င်သောရေချိုးခန်းများပါ ၀ င်သောဇိမ်ခံတဲများပါ ၀ င်သည်သို့မဟုတ်သက်ငယ်မိုးများ၊ လှည့်ဖျားနေသောအကိုင်းအခက်များ၊ ကျယ်ပြန့်သောကုန်းပတ်showရိယာများ၊ ။
City Sightseeing Tours လည်ပတ် ကင်ညာ Safari Tour Packages နှင့်အားလပ်ရက်ခရီးစဉ်များ။ ကင်ညာ Safari Tours ကိုကမ်းလှမ်းသည် Masai Mara Safaris, Amboseli Safari ခရီးစဉ်, Samburu Kenya Safari ခရီးစဉ်၊ Nakuru ရေကန်ခရီးစဉ်၊ ကင်ညာ Safari ဘွတ်ကင်.
ကင်ညာအုပ်စု Safaris သို့ပူးပေါင်း
နိုင်ရိုဘီတွင်အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်များအပါအ ၀ င်အစီအစဉ်တစ်ခုပါ City Sightseeing Tours
စူးစမ်းလေ့လာရန်အကောင်းဆုံး Safari Packages
ကင်ညာသည်အရှေ့အာဖရိက Safari ၏သမိုင်းဝင်နေရာဖြစ်ပြီး Big Cats အပါအ ၀ င်သြဇာကြီးမားသောသတ္တဝါများနေထိုင်သောမြက်ခင်းပြင်များလွှမ်းခြုံသောပြည်ဖြစ်သည်။ ငါးကြီး (ဆင်၊ ကျွဲ၊ ခြင်္သေ့၊ ကျားသစ်နှင့်ကြံ့) နှင့်အကြား၌အကြောင်းကိုအရာအားလုံး။ အခြားဒေသများရှိရှုခင်းများသည်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုမြောက်ဘက်ရှိသဲကန္တာရများ၊ အနောက်ဘက်တွင်ထူထပ်သောသစ်တောများ၊ အလယ်ဗဟိုရှိ Rift ချိုင့်ဝှမ်းများနှင့်အရှေ့ဘက်ရှိအပူပိုင်းဒေသကမ်းရိုးတန်းတို့ဖြင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုနှိုးဆွပေးသည်။ Safari ရှိသူများအတွက်ဤရလဒ်သည်သင့်အားအာဖရိကရှိအလှဆုံးနောက်ခံများထဲမှတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်အားသရုပ်ပြရန်သင့်အားပြသရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်အတွေ့အကြုံရှိ Safari လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ငါတို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အချိန်ယူပါပြီ ကင်ညာ Safari အားလပ်ရက် အစီအစဉ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့တည်နေရာများ၊ Safari တည်းခိုခန်းများ၊ စခန်းများနှင့်ဟိုတယ်များသည်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသည့်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် Safari နှင့်ကင်ညာကမ်းခြေရွေးချယ်စရာများကိုပြိုင်ဘက်ကင်းသောအစီအစဉ်ဖြင့်ကမ်းလှမ်းထားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။
တစ်ဦးတွင် ကင်ညာ Safari City Sightseeing Tours နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းသည်စင်မြင့်တစ်ခုစီနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းနှင့်လွှဲပြောင်းခြင်းခံရလိမ့်မည်။ များသောအားဖြင့် 4WD မော်တော်ယာဉ်ရှိ Safari Safari စခန်းသို့မဟုတ်သင်ညဥ့်နေသည့်နေအိမ်တွင်တည်းခိုသည့်ကားမောင်းသူလမ်းပြခြင်းဖြစ်သည်။ ဂိမ်းကစားခြင်း၊ ချုံပုတ်ခြင်းနှင့်အခြားလှုပ်ရှားမှုများကိုသင်၏စခန်းရှိအိမ်ရှင်သို့မဟုတ်လမ်းညွှန်များကပြုလုပ်သည်။
Willgoto, ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလမ်းညွှန်နှင့်ခရီးသွားလမ်းညွှန် ခရီးသွားနှင့်ခရီးသွားလမ်းညွှန် ခရီးသွားကလစ်
3 နေ့ရက်များ Masai Mara Safari
3 ရက်ကြာ Masai Mara Safari သည် Masai Mara Game Reserve သို့အပန်းဖြေခရီးထွက်သည်။
4 နေ့ရက်များ Masai Mara, Naivasha Safari
4 ရက် Masai Mara Lake Nakuru Safari သည်ကင်ညာနိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးခရီးသွားနေရာများသို့ပို့ဆောင်ပေးသည်။
နိုင်ရိုဘီအမျိုးသားဥယျာဉ်သည်ကင်ညာနိုင်ငံ၏မြို့တော်၏ဗဟိုမှ6မိုင် (10 ကီလိုမီတာ) ရှိသည်။
Daphne Sheldrick ဆင်
အဆိုပါ Sheldrick ဆင်မိဘမဲ့ဂေဟာ နိုင်ရိုဘီအမျိုးသားဥယျာဉ်အနီးတွင်တည်ရှိသည်။
နောက်ဆုံးပေါ် Blog နှင့်သတင်းများ
Marsabit National Park & ​​Reserve ကိုမိတ်ဆက်ရန်နည်းလမ်းများ။
နိုဝင်ဘာလ 3, 2019 အပေါ်တင်ခဲ့သည်
Marsabit အမျိုးသားဥယျာဉ်နှင့်အရံ“ မြူဆိုင်းသော Montane ပရဒိသု” Marsabit အမျိုးသားဥယျာဉ်သည် Kenabit မြောက်ပိုင်းတွင်ရှိပြီး Marsabit ခရိုင်နိုင်ရိုဘီ၏မြောက်ဘက် 560km ခန့်တွင်ရှိသည်။ ပန်းခြံမှာသိပ်သည်းစွာပါဝင်သည်
3 နေ့ရက်များအတွင်း Samburu National Reserve ကိုလေ့လာရန် Beginner ၏လမ်းညွှန်
Samburu National Reserve သည်ကင်ညာနိုင်ငံ Rift Valley ပြည်နယ်ရှိ Samburu ခရိုင်တွင်တည်ရှိသောကြမ်းတမ်းပြီးသဲကန္တာရတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါပန်းခြံ၏ Samburu အနွယ်၏အိမ်များကိုအိမ်နီးချင်း
နိုဝင်ဘာလ 2, 2019 အပေါ်တင်ခဲ့သည်
Tsavo အနောက်အမျိုးသားဥယျာဉ် Tsavo အနောက်အမျိုးသားဥယျာဉ်နှင့် Tsavo အရှေ့အမျိုးသားဥယျာဉ်များသည်တစ်ချိန်ကဥယျာဉ်တစ်ခုတည်းဖြစ်သော်လည်းယခုအခါကွဲကွာနေသည်။ Tsavo အနောက်အမျိုးသားဥယျာဉ်၏အနောက်ဘက်တွင်တည်ရှိသည်
9 Tsavo အရှေ့အမျိုးသားဥယျာဉ်ကင်ညာအကြောင်း
အောက်တိုဘာလ 20, 2019 အပေါ်တင်ခဲ့သည်
Tsavo အရှေ့အမျိုးသားဥယျာဉ်ကင်ညာအတွက်လမ်းညွှန် Tsavo West နှင့် Tsavo East National Park Kenya ပူးတွဲအစုလိုက်အပြုံလိုက်သည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအမျိုးသားဥယျာဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
5 အကောင်းဆုံး Amboseli အမျိုးသားဥယျာဉ်ရှိဟိုတယ်များ - တည်းခိုခြင်း၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်စျေးနှုန်းများ
အောက်တိုဘာလ 13, 2019 အပေါ်တင်ခဲ့သည်
5 အကောင်းဆုံး Amboseli အမျိုးသားဥယျာဉ်ရှိဟိုတယ်များကင်ညာတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်၏လှပမှုကိုခံစားလိုသူမည်သူမဆိုအတွက် Amboseli အမျိုးသားဥယျာဉ်သည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ကင်ညာနိုင်ငံ၏ဒုတိယအကြီးဆုံးနှင့်အကြီးဆုံးဖြစ်သည်
ဇူလိုင်လ 29, 2019 အပေါ်တင်ခဲ့သည်
Amboseli အမျိုးသားဥယျာဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကင်ညာကင်ညာနိုင်ငံသည်အမြင့်ဆုံးတောင်ထိပ်ဖြစ်သော Kilimanjaro တောင်ထိပ်တွင်တည်ရှိသော Amboseli အမျိုးသားဥယျာဉ်သည်ကင်ညာနိုင်ငံ၏အကျော်ကြားဆုံးပန်းခြံများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ “ Amboseli” ဟူသောစကားလုံးသည်က
Air & Balloon Safaris၊ ကမ်းခြေအားလပ်ရက်များ၊ Eco-Safaris၊ ငှက်စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ဂေါက်သီး၊ ကျောင်းသားအားလပ်ရက်များ၊ ဘတ်ဂျက်အားလပ်ရက်များ၊ အုပ်စုများ၊ ပျားရည်ဆမ်းခရီး၊ မိသားစုအားလပ်ရက်များ၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ Tours နှင့်သာသနာပြုခရီးစဉ်။
KENYA SAFARI အကြောင်းမကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများနှင့် SAFARI သို့သွားရန်အကောင်းဆုံးအချိန်များ
မက်ဆာရာမာရာသည်ကင်ညာနိုင်ငံသို့လှိုင်းရိုင်းရိုင်းရိုင်းစိုင်းသောပြောင်းရွှေ့နေထိုင်မှုကိုမည်သည့်နေရာသို့သွားရမည်နည်း။ သို့သော်အရှေ့အာဖရိကနိုင်ငံအတွက်မူများစွာရှိသည်။ Amboseli နှင့် Tsavo ကဲ့သို့သောဂန္ထဝင်ဂိမ်းကြီးများကိုမကြာသေးမီကဖွင့်လှစ်လိုက်သော Laikipia Plateau ဒေသကဲ့သို့အလွယ်တကူရရှိနိုင်သည်။
ကင်ညာ Safari ၏ဒရာမာဇာတ်ကားပြီးနောက်သဲဖြူသဲသောင်ပြင်ပေါ်တွင်ပျင်းရိသည့်ရက်အနည်းငယ်ထက်အဘယ်အရာပိုကောင်းနိုင်မည်နည်း။ ကင်ညာနိုင်ငံ၏အပူပိုင်းဒေသကမ်းရိုးတန်းသည်ဆူညံသောအပန်းဖြေစခန်းများမှအစသီးသန့်ကျွန်းဝန်းရံထားသည့်နေရာများအထိ Safari နှင့်ကမ်းခြေအားလပ်ရက်များအတွက်တိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ကင်ညာတွင်သိသာထင်ရှားသည့် Safari လမ်းကြောင်းမရှိသော်လည်းအတူတကွအလွယ်တကူသွားရောက်လည်ပတ်နိုင်သောဥယျာဉ်များရှိသည်။ တိုင်းပြည်သည်အတော်လေးကျဉ်းမြောင်းသည် ဖြစ်၍ ထို့ကြောင့်တရားဝင်တိုက်နယ်မပြုလုပ်သောပေါ်လွင်ချက်အချို့ကိုယူရန် 'ရောနှောယှဉ်ပြိုင်နိုင်' နိုင်သည်။
လူအများစုသည်နိုင်ရိုဘီသို့ပျံသန်းကြသည် Jomo Kenyatta နိုင်ငံတကာလေဆိပ် (NBO) နှင့်ထိုနေရာမှ (ပြည်တွင်း Wilson လေဆိပ်မှ) ဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်ပါ။ မည်သည့်ဆားကစ်ကိုမဆိုရွေးချယ်ပါစေ၊ ခရီးစဉ်တိုင်းတွင်သေချာပေါက်ဖြစ်သင့်သည့်နိုင်ရိုဘီမှ Masai Mara သို့အမြဲတမ်းအပြန်လေယာဉ်တစ်စင်းထည့်နိုင်သည်။
အနောက်တောင်ဘက် Safari ကတိုက်နယ်
Masai Mara National Reserve (2 မှ4ရက်အထိ) တိုင်းပြည်၏အဓိကဆွဲဆောင်မှုဖြစ်သည်။ တန်ဇန်းနီးယားရှိအိမ်နီးချင်း Serengeti မှရိုင်းစိုင်းစွာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်မှုကြောင့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းတိုးပွားလာသောတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များနေထိုင်သည့်လူ ဦး ရေသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်နေထိုင်လျက်ရှိသည်။
ရေကန် Nakuru အမျိုးသားဥယျာဉ် (1 မှ2ရက်အထိ) သာယာလှပသည့် Rift ချိုင့်ဝှမ်းတွင်တည်ရှိပြီး၎င်း၏အဖြူနှင့်အဖြူကြံ့များကျန်းမာစွာနေထိုင်သည်။
Hell's Gate National Park နှင့် Naivasha ရေကန် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်အကြားစက်ဘီးစီးသည်
Bogoria ရေကန်နှင့် Baringo ရေကန် Bogoria ရေကန်တွင်ငှက်မွှားများနှင့်မီးလျှံများစုပုံခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်
Amboseli အမျိုးသားဥယျာဉ် Mt Kilimanjaro နှင့်ဆင်၏ကြီးမားသောနွားအုပ်ငယ်များ၏အမြင်များအတွက်ဖြစ်သည်
Lamu ကျွန်း ကမ်းခြေပေါ်တွင်ဆွာဟီလီယဉ်ကျေးမှုနှင့်အပန်းဖြေမှုအတွက်အရသာတစ်ခုဖြစ်သည်
အရှေ့တောင် Safari ကတိုက်နယ်
သငျသညျကမ်းခြေအားလပ်ရက်စီစဉ်နေတယ်ဆိုရင်, Safari က add-on ကိုများအတွက်ရွေးချယ်စရာအများအပြားရှိပါတယ်။ ထိုပန်းခြံများကို Mombasa နှင့် Watamu ဝန်းကျင်ရှိနိုင်ရိုဘီမှမည်သည့်ကမ်းခြေအပန်းဖြေစခန်းမှမဆိုကားဖြင့်အလွယ်တကူရောက်ရှိနိုင်သည်။
Tsavo အရှေ့အမျိုးသားဥယျာဉ် (2 မှ3ရက်အထိ) ကင်ညာနိုင်ငံ၏အကြီးမားဆုံးပန်းခြံနှင့်ဆာဗားနားနှင့်မြောက်ပိုင်းသဲကန္တာရအကြားအကူးအပြောင်းကာလဖြစ်သည်။ ကျယ်ပြန့်သောနေရာများသည်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်စွဲမက်စရာကောင်းသည်။
Amboseli အမျိုးသားဥယျာဉ် (2 မှ3ရက်အထိ) Mt Kilimanjaro ၏အခြေခံတွင်ဆင်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောဆင်များကိုကြည့်ရှုနိုင်ပြီးကင်ညာနိုင်ငံ၏အကျော်ကြားဆုံးပန်းခြံများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
Masai Mara National Reserve အဆိုပါ wildebeest ရွှေ့ပြောင်းခြင်းနှင့်ကြီးမားသောကြောင်အရေးယူမှုကိုမြင်လျှင်အဘို့
Diani သဲသောင်ပြင် အချို့သောနေနှင့် surf အတွက်
Shimba Hills National Reserve ရှားပါး Sable ဘမ်းမိသောစိုင်ကိုမြင်လျှင်သည်
ဗဟိုနှင့်မြောက်ပိုင်း Safari ကတိုက်နယ်
Meru အမျိုးသားဥယျာဉ် (2 မှ3ရက်အထိ) ခြောက်သွေ့သောမြေအနေအထားကိုဖြတ်ကျော်စီးဆင်းနေသောရေစီးဆင်းမှုများနှင့်အတူအလွန်သာယာလှပသည်။
Samburu National Reserve နှင့် Buffalo Springs National Reserve (2 မှ3ရက်အထိ) အနီးအနားရှိပန်းခြံများမှာ ပို၍ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်ခြောက်သွေ့သောတိရိစ္ဆာန်မျိုးစိတ်များကိုဖော်ပြသည်။
လိုင်ကိုပီးကုန်းပြင်မြင့် (2 မှ3ရက်အထိ) Mt Kenya ၏အခြေစိုက်စခန်းတွင်ကိုယ်ပိုင်ဂိမ်းသိုလှောင်မှုအများအပြားရှိပြီးအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ကြံ့များကိုတွေ့မြင်ရန်အခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည်။
Aberdare အမျိုးသားဥယျာဉ် (1 မှ2ရက်အထိ) အလယ်ပိုင်းကုန်းမြင့်ဒေသများတွင် Treetops နှင့် Ark အပါအ ၀ င်သစ်ပင်များရှိဟိုတယ်များတွင်ထိုင်နေရင်းတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်များကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်သည်။ ဤနေရာများသည်သင်ထိုင်နေသောတိရစ္ဆာန်များသင့်ထံလာရောက်ကြည့်ရှုခြင်းကိုမြင်နိုင်သည်။
မတူကွဲပြားသောပထဝီဝင်အနေအထားသည်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုဆိုလိုသည်ဖြစ်သော်လည်းကင်ညာသည် Safaris နှင့်ကမ်းခြေအားလပ်ရက်များအတွက်နှစ်စဉ်ခရီးသွားနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကင်ညာ Safari ရှိနေရာအများစုမှာသူတို့ဖြစ်သည် ဇန်နဝါရီလနှင့်မတ်လကုန်အကြားအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်; ရာသီဥတုသည်နူးညံ့ပြီးအများအားဖြင့်ခြောက်သွေ့ပြီးဂိမ်းကြည့်ရှုခြင်းသည်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ သဘာဝကျကျဤအချိန်ကို Safari တွင်ကင်ညာသို့သွားရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဟုသတ်မှတ်သည်။ သို့သော်မတ်လလယ်မှဇွန်လအထိအောက်တိုဘာမှဒီဇင်ဘာလအထိမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသည့်အလည်အပတ်ခရီးသည်ရာသီဥတုအမြင့်ဆုံးလူစုများရှောင်ရှားရန်နှင့်လေ့လာရန်အတွက်သင့်လျော်သည်။ နေရာထိုင်ခင်းနှင့်ခရီးစဉ်များအတွက်စျေးသက်သက်သာသာနှင့်ရာသီဥတုနှုန်းထား၏အားသာချက်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ကင်ညာသို့အလည်အပတ်ရောက်ရှိရန်အကောင်းဆုံးအချိန်မှာဇန်နဝါရီမှမတ်လအထိသို့မဟုတ်ဇူလိုင်လမှအောက်တိုဘာလအထိခြောက်သွေ့ရာသီနှစ်ခုဖြစ်သည်။ ခြောက်သွေ့ရာသီ၏သဘောသဘာဝအရတောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်အစက်အပြောက်များသည်ယခုအချိန်တွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်ပြီးအကွာအဝေးကိုကြည့်လျှင်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ထို့အပြင်တိရိစ္ဆာန်များသည်ရေတွင်းများသာမကမြစ်များနှင့်ရေကန်များကဲ့သို့ပင်စုဝေးလေ့ရှိရာ၎င်းတို့ကိုရှာဖွေရန်မှာပိုမိုလွယ်ကူသည်။
ကင်ညာနိုင်ငံ၏rainပြီမှဇွန်နှင့်နိုဝင်ဘာလအထိဒီဇင်ဘာလမှဒီဇင်ဘာလအထိမိုးရွာသောရာသီဥတုသည်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များကြည့်ရှုရန်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်မဟုတ်ပါ သို့သော်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်နိုင်ငံ၏ရှုခင်းကိုအသွင်ပြောင်းကာစိမ်းလန်းစိုပြေလာပြီးမြစိမ်းစိမ်းလန်းလာသည်။ လှပသောဓာတ်ပုံအချို့ကိုဖန်တီးပေးသည်။
ရာသီဥတုဆိုးဝါးမှုနှင့်အတူရာသီဥတုနိမ့်ကျသည့်ရာသီများနှင့်လည်းတိုက်ဆိုင်နေသဖြင့်လူနေထူထပ်စွာမြင်တွေ့ရသော Safari ဥယျာဉ်များသည်နေရာထိုင်ခင်းနှင့်ခရီးစဉ်များအတွက်နှုန်းထားများကျဆင်းနိုင်သည်။
ကင်ညာ၏ကမ်းရိုးတန်းဒေသများဖြစ်သော Diani နှင့် Mombasa မှ Malindi နှင့် Lamu ကျွန်းစုမြောက်ပိုင်းရှိကျွန်းများသည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးပူပြင်းပြီးစိုစွတ်သောရာသီဥတုကိုတွေ့ကြုံရသည်။ သို့သော်မတ်လလယ်မှမေလကြားတွင်အပူချိန်နှင့်မိုးရွာသွန်းမှုသည်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်ကင်ညာရှိ Safari နှင့်ပင်လယ်ကမ်းခြေအနားယူရန်စီစဉ်နေပါကဤလများပြင်ပသို့သွားရောက်ရန်စဉ်းစားပါ။
ရေငုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ရေငုပ်ခြင်းအတွက်စိတ်အားထက်သန်သူများသည်အရှင်းလင်းဆုံးပင်လယ်များအတွက်အောက်တိုဘာ၊ နိုဝင်ဘာနှင့်မတ်လများအတွင်းလည်ပတ်သင့်သည်။ ဒေသခံပင်လယ်ရေကြောင်းများတွင်ကဏန်းများ၊ ကြယ်ငါးပွင့်၊ လိပ်များနှင့်ရောင်စုံသန္တာကျောက်တန်းအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ကင်ညာနိုင်ငံ၏အပူပိုင်းဒေသရေသည်ဝေလငါးမန်းများအထူးသဖြင့် Diani သဲသောင်ပြင်တွင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခြင်းကြောင့်လည်းထင်ရှားသည်။ အောက်တိုဘာမှAprilပြီလအတွင်းတွင်ဝေလငါးမန်းများ Safaris သည်ဤနူးညံ့သိမ်မွေ့သောကုမ္ပဏီများကိုမပျက်စီးသေးသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်တွေ့မြင်ရန်အခွင့်အရေးပေးသည်။
အဆိုပါ တောင်ကင်ညာတောင်တက်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန် နှင့် Kilimanjaro သည်အနွေးဆုံးနှင့်ခြောက်သွေ့ဆုံးလဖြစ်သည့်ဇန်နဝါရီ၊ ဖေဖော်ဝါရီနှင့်စက်တင်ဘာများဖြစ်သည်။ ဇွန်လ, ဇူလိုင်လနှင့်သြဂုတ်လလည်းဖြစ်ကြသည် ကောင်းသော လများ။ သို့သော်အပူချိန်နှင့်ရာသီဥတုသည်ခန့်မှန်းရခက်။ များစွာသောအပူချိန်ပေါ် မူတည်၍ ပြောင်းလဲနိုင်သည် အချိန် နေ့နှင့်အမြင့်၏။
ကင်ညာနိုင်ငံအခြေစိုက်ခရီးသွားလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေဖြင့်အရှေ့အာဖရိက၏ထိပ်တန်းခရီးသွားအချက်အချာဖြစ်သောနိုင်ရိုဘီတွင်ကျွန်ုပ်တို့ထူးခြားသောတည်နေရာသည်သင့်အားအကောင်းဆုံးခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုပေးသူဖြစ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မတူကွဲပြားသော Safari ထုတ်ကုန်များကသင်၏ခရီးသွားလိုအပ်ချက်အားလုံးကိုသင်၏အိမ်ခေါင်မိုးတစ်ခုတွင်ရှာတွေ့နိုင်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အချင်းပြည့်မီသောအားလပ်ရက်စီစဉ်သူများကသင့်အားပတ် ၀ န်းကျင်စုံလင်သောအတွေ့အကြုံကိုပေးဖို့အသေးစိတ်ကိုအသေးစိတ်ဂရုပြုကြသည်။
Masai Mara အမျိုးသားဥယျာဉ်
Marsabit အမျိုးသားဥယျာဉ် & Reserve
Daphne Sheldrick ဆင်မိဘမဲ့ဂေဟာ
3 နေ့ရက်များ Amboseli အမျိုးသားဥယျာဉ် Safari
4 နေ့ရက်များ Masai Mara-Lake Naivasha Safari
5 နေ့ရက်များ Masai Mara-Lake Naivasha-Lake Nakuru Safari
6 နေ့ရက်များ Masai Mara-Lake Naivasha-Lake Nakuru-Amboseli Safari
6 နေ့ရက်များ Masai Mara-Lake Nakuru-Amboseli Safari
ရုံးချုပ်: ကင်ညာရုပ်ရှင်ရုံပလာဇာ၊ မိုးရိပ်သာလမ်း၊
4th ကြမ်းပြင်, Suite C7,
ရုံးတယ်လီဖုန်း: + 254 790 006 650
အီးမေးလ်: info [at] citysightseeing.co.ke
© 2019 City Sightseeing Tours ။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။ www.webscreationsdesign.com